Hoggaamiyeyaal Soomaali ah ayaa Isniintii (26-ka March) isugu yimid Gaalkacyo si ay uga wada hadlaan dardar-galinta iyo fulinta qorshe hawleedka, doorashada baarlamaanka cusub, iyo qabyo-qoridda dastuurka cusub, Idaacadda Radio Bar-Kulan oo ay Qaramada Midoobay maal-geliso ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Raysal wasaare Cabdiweli Maxamed Cali, Afhayeenka Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aaden, iyo saraakiil ka ka socota Puntland Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ka qaybgalaya shirka iyo weliba xubno ka mid ah beesha caalamka oo uu ka mid yahay ergayga QM, Augustine Mahiga, SONNA ayaa werisay. Qorshe-hawleedka ayaa la sixiixay September 6-deedii 2011 waxaana kala sixiixday dawladda Soomaaliya iyo gobollada ismaamullada leh, waxaana uu heshiisku qeexayey qorsheyaal ku beegan dhamaashaha sharciyadda DFKMG ah, waxaanay sidoo kale heshiiska dhinacyadu wax iskala meel dhigeen ammaanka, dib-u-heeshiisiinta, iyo dib-u-habaynta baarlamaanka iyo dastuurkaba. Madaxweynaha iyo raysal wasaaraha ayaa la filayaa in ay booqdaan koofurta Gaalkacyo galabta Isniinta ah, halkaa oo la qorsheeynayo in ay wadahadallo kula yeeshaan Madaxweyne ku Xigeenka Galmudug, Cabdinaasir Nuur Guuleed, Radio Bar-Kulan ayaa intaa weriyey. Muxuu kula yahay qoraalkan?